Vaovao - Tombony sy fitandremana amin'ny fametrahana metatra elektrika miaraka amin'ny mpanova ankehitriny
Andian-tsarimihetsika avo lenta avo lenta
Andian-tsarimihetsika avo lenta
Series vacuum any ivelany
Andian-drivotra anaty trano
Andian-tsolika SF6 ivelany
Andian-tsolika SF6 ao anaty trano
Solika karazana solika
Series maina karazana
Andian-tsarimihetsika anaty trano
Andian-tsarimihetsika vita amin'ny silipo
Andian-tsarimihetsika vita amina tranga
Automatic Series Type Series
Tombony sy fitandremana amin'ny fametrahana metatra elektrika miaraka amin'ny mpanova ankehitriny
Fa maninona no ilaina fitaovana mpanova metatra? Izany dia hialana amin'ny fandoroana ny metatra sy ny fanangonana vola. Raha amin'ny fitehirizana vola, ny vidin'ny metatra kely misy ankehitriny dia misy ambany noho ny metatra ankehitriny. Raha ny fahitana ny fiarovana ny metatra herinaratra, raha toa ka mihoatra ny refin'ny fandeferana ny metatra ny habetsaky ny tsiranoka ao anaty tadiny iray manontolo, dia ho simba izany. Mba hisorohana ny fandoroana ny metatra dia ilaina ny mametraka kalitao tsara 11kv mpanova ankehitriny.
ny fepetra amin'ny fametrahana metatra elektrika dia misy ireto manaraka ireto:
1. Hamarino alohan'ny hametrahana
Zahao ny metatra alohan'ny hametrahana azy, mba hahitana ny fisehon'ilay metatra. Mitandrema rehefa mijery mba tsy hividy vokatra ambany. Amin'ny ankapobeny, ny metatra novokarin'ny mpanamboatra mahazatra dia hanana tombo-kase, indrindra fa mitandrema amin'ity teboka ity, hahitana raha feno ny tombo-kase, ary azo apetraka aorian'ny fizahana ny fitsapana.
2. Ny toerana fametrahana
Ny metatra dia tsy apetraka tampoka eo akaikin'ny varavarana fidirana. Izy io koa dia misy fepetra takiana amin'ny tontolo iainana manodidina. Ny tsara indrindra dia ny mametraka azy amin'ny toerana somary foana. Ao anatin'ny -40 degre, ny hamandoana dia tsy mety ho avo kokoa noho ny 85%, miaraka amin'izay dia tsy azo aseho mivantana amin'ny tara-masoandro, ny haavony dia voatazona amin'ny 1.8m.
3. Ny fiasa fametrahana
Rehefa mametraka ny metatra dia mila apetrakao arakaraka ny kisary tariby, ampifandraiso tsirairay ireo tariby etsy ambony, tsy maintsy apetraka amin'ny toerany ny visy tsirairay, mila mandramana aorian'ny fametrahana ianao, ary azonao ampiasaina aorian'ny fandalinana ny fitsapana.
Fotoana fandefasana: Jul-17-2020
6 # Liujiang Road, Liushi Town, Wenzhou City, Zhejiang Province, Sina
Zava-misy mahaliana momba ny taom-baovao sinoa
Miarahaba anao amin'ny 11kv & 33KV c ...
33kV ivelany 35kV 36kV 1250A Vacuum Circu ...
Fa maninona no tsy mitovy ny vidiny?
Tombony sy fitandremana amin'ny fametrahana ...